ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် တံထွေး အများကြီးထွက်တာ ပုံမှန်ပဲလား....... - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 12/08/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အရင်က တံထွေးတွေ အဲ့လောက် များများ ထွက်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ ခုမှ တံထွေးတွေ အများကြီး ထွက်နေတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပြောင်းလဲမှုရယ်ဆိုလို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတော့ ရှိတယ်။ ဒါဆို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် တံထွေး အများကြီးထွက်တာ ပုံမှန်ပဲလား…….……
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ပုံမှန်ထက် တံထွေးပိုထွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဘယ်အချိန် ဖြစ်မယ်ရယ်လို့ အတိအကျ ပြောလို့ မရဘဲ ရုတ်တရက် ဖြစ်လာတာမျိုးပါ။ ကိုယ်ဝန် ရစမှာ ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၂ ပတ် ကနေ ၃ ပတ်လောက်မှာ စဖြစ်တာပါ။
ဘာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ တံထွေးတွေ အများကြီးထွက်နေရတာလဲ…….
ကိုယ်ဝတ်ဆောင်ချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဟော်မုန်း ပြောင်းလဲတာကြောင့် တံထွေးဂလင်း အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းလဲပြီး တံထွေးတွေ အများကြီး ထွက်လာရတာပါ။ တံထွေး ထုတ်လွှတ်တဲ့ ဂလင်းတွေကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အာရုံကြောတွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် တံထွေးတွေက ပုံမှန်ထက် ပိုထွက်နေတာပါ။
တံထွေး အများကြီးထွက်တာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မ မအီမသာဖြစ်တာနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် တံထွေး အများကြီးထွက်တာ ပုံမှန်ပဲလား………….. စိုးရိမ်ရလား……
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ တံထွေး အများကြီး ထွက်တာက ပုံမှန်ပါပဲ။ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ ညအိပ်တဲ့အခါ တံထွေးတွေ စီးကျတာမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို တံထွေးကို မျိုချဖို့ ခက်ခဲပြီး ခဏခဏ ထွေးနေရတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ မအီမသာ ခံစားရတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအပြင်
စကားပြောတဲ့အခါ တံထွေး ထိန်းရခက်ပြီး တံထွေးတွေ ထွက်ကျတာမျိုး
ပါးရောင်နေသလို ခံစားရတာမျိုး (တံထွေးဂလင်း ရောင်နေတာကြောင့် ပါးရောင်တာပါ)
ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ဘဲ ခြေကုန်လက်ပမ်း ကျနေတာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
တံထွေးတွေ အများကြီး ထွက်တာက ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဒုတိယ (၃) လပတ်ကို ရောက်တဲ့အခါ သူ့အလိုလို သက်သာသွားကြတာ များပါတယ်။ အချို့ မေမေတွေမှာတော့ ဘေဘီလေးကို မွေးဖွားပြီးမှ သက်သာသွားတာမျိုး ရှိပါတယ်။
တံထွေးတွေ အများကြီး ထွက်တာကို ကုသတဲ့ နည်းလမ်းရယ်လို့ တိတိကျကျ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သက်သာစေဖို့ ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို လုပ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
တံထွေးထွေးလို့ရမယ့် အိတ်၊ ခွက်စတာတွေကို သွားလေရာကို ယူသွားပါ။
ရေသောက်ပါ။ ရေသောက်တာက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေကို ရေဓာတ် ပြည့်စေသလို တံထွေးထွက်တာကိုလည်း သက်သာစေမှာပါ။
မြေပဲလှော် ဒါမှမဟုတ် သီဟိုဠ်စေ့လှော် စားပေးပါ။
ပူရှိန်း ပီကေ ဝါးပါ။
သွားကို ပူရှိန်း အရသာ ပြင်းတဲ့ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ တိုက်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေတို့အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ ခံတွင်းသန့်ဆေး သုံးပါ။
ညအိပ်တဲ့အခါ ခေါင်းအုံးပေါ်ကို တဘက်လေး ခင်းအိပ်ပါ။
ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို သုံးပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ခံစားရတဲ့ တံထွေးအများကြီး ထွက်တာကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေဖို့ လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ်။
I’m salivating more than usual now I’m pregnant. Is this normal? https://www.babycentre.co.uk/x549369/im-salivating-more-than-usual-now-im-pregnant-is-this-normal Accessed Date 12 August 2021
Excessive saliva in pregnancy https://www.nct.org.uk/pregnancy/worries-and-discomforts/common-discomforts/excessive-saliva-pregnancy Accessed Date 12 August 2021
ပါးစပ်ထဲက တံထွေး ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အထောက်အကူပြုသလဲ။